कुन महिनामा जन्मेका केटीमान्छेको स्वभाव कस्तो ? हेर्नुहोस् – Sandesh Munch
काठमाडौँ । मानिस एकै महिनामा जन्मिन्छ भन्ने छैन। १२ महिना मध्ये जुन महिनमा पनि जन्मिएको हुन सक्छ। तर अचम्मको कुरा के छ भने फरक महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव फरक पाइने गरेको छ।
कुन महिनामा जन्मेका केटीमान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ त। यस्ता छन् फरक महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव:
साउन महिनालाई पवित्र र शुभ महिना मानिन्छ । यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरू राम्रो र धार्मिक काममा बढी मन लगाउँछन् । उनीहरूको जीवनमा समान रुपमा सुख, दुःख, फाइदा र नोक्सान हुने देखिन्छ ।
यी महिलाहरूले सन्तानबाट सुख प्राप्त गर्छन् । यी महिलाहरू अधिकांस समय कुनै न कुनै बिमारीबाट घेरिरहेका हुन्छन् । यस्ता महिलाहरू श्रीमान तथा प्रेमीबाट अधिक प्रेमको आशा राख्ने गर्दछन् ।
Nextअब खुल्दैछ भाग्यको ढोका यि ४ राशि हुनेहरूको, हेर्नुहोस तपाई कुन राशि ?
आयलनिगमका ९ क’र्मचारीसहित १६ जनामा को’रोना सं’क्रमण
दुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता! (10225)